ဦးဆန်းဆင့်အနေဖြင့် သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ရာထူး ကိုလက်ခံခြင်းမပြုရန် ဆုံးဖြတ် …. | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
ဦးဆန်းဆင့်အနေဖြင့် သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ရာထူး ကိုလက်ခံခြင်းမပြုရန် ဆုံးဖြတ် ….
ဦးဆန်းဆင့်အနေဖြင့် သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ရာထူး ကိုလက်ခံခြင်းမပြုရန် ဆုံးဖြတ်…….
ဦးဆန်းဆင့်အနေဖြင့် သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ရာထူး ကိုလက်ခံခြင်းမပြုဘဲ မူလတာဝန်ကိုသာ ထမ်းဆောင်ရန် ဆုံးဖြတ် လိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဆန်းဆင့် က
သာသနာရေးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်ခံရသော ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဆန်းဆင့်အနေဖြင့် မူလတာဝန်ဖြစ်သော တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်သာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့်ပြုပါရန် နိုင်ငံတော်သမ္မတသို့ တင်ပြထားပြီဖြစ်ကြောင်း ဦးဆန်းဆင့်က ပြောသည်။
“ကျွန်တော်ကတော့ ပြည်သူ့ဆန္ဒအရ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုပဲ ထမ်းဆောင်လိုပါတယ်ဆိုတာ သမ္မတကြီးကို တင်ပြလိုက်ပါပြီ။ ပြန်ပြီးအကြောင်းပြန်ကြားခြင်းတော့ မရှိသေးပါဘူး” ဟု ဥက္ကဋ္ဌက ဆိုသည်။
ပြည်သူများမှ မိမိအား လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်သာ ဆက်လက်ရှိစေလိုသော ဆန္ဒများရှိသဖြင့် သမ္မတသို့ ယခုလ ၃ ရက်တွင် တင်ပြခဲ့ပြီး မိမိသည် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဖြစ်သဖြင့် ပြည်သူ့ဆန္ဒကိုသာ အလေးထားမည်ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်က ပြောသည်။
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဆန်းဆင့်အား သာသနာရေးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအဖြစ် ထမ်းဆောင်ခြင်းမပြုဘဲ မူလတာဝန်ကိုသာ ထမ်းဆောင်ခွင့်ပေးပါရန် တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ပြည်သူများမှ စုပေါင်းလက်မှတ်ရေးထိုးသူ နှစ်သောင်းခန့်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါကိစ္စကို ဆောင်ရွက်နေသူ ကိုထွန်းထွန်းဦးက ပြောသည်။
ထို့ပြင် အဆိုပါကိစ္စအား ယခုလ ၇ ရက်တွင် ပုသိမ်မြို့ပေါ်၌ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ရန်အတွက် တင်ပြဆောင်ရွက်နေပြီး လူအင်အား ၂၀၀၀ ခန့်ပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
ဦးဆန်းဆင့်အား သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်နိုင်ရေးအတွက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှ အတည်ပြုပေးနိုင်ပါရန် နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ သ၀ဏ်လွှာပေးပို့မှုအပေါ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှ သဘောတူကြောင်း ဇန်န၀ါရီ ၃၁ တွင် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
← ပြောပြန်ရင်လည်း လွန်တော့မယ် (၁)။
ဘာသာသာသနာဆိုင်ရာပြစ်မှုများ ပုဒ်မ ၂၉၅-က။ ။ →